विद्वान् हो ? (लघु कथा) – Chitwan Post
विद्वान् हो ? (लघु कथा)
मुटुभरि माटोको माया बोकेर स्वदेश फर्कियो डा. सुबोध कँडेल । जीवनको हरेक परीक्षामा ‘सर्वोत्तम’ सावित भएको सुबोधलाई विदेशी सरकारले नै जागिर र सुविधा दिने प्रस्ताव राखेको थियो । ‘छोरा, तिमी पनि पलायन ?’ नेपाल आमाले सपनामा आएर यस्तो प्रश्न गरेकी । ऊ स्वयम् पनि भौतिक प्रचुरताभन्दा देशको माया ठूलो हो भन्ने निर्णय गरेर विदेशी वैभव र विदेशी प्रेमिका दुई नै त्यागी फर्कियो घरदेश ।
परदेश आखिर परदेश ! ‘अब के गर्ने ?’ चाणक्य नीतिमा पोख्त थियो । ‘राजनीतिबाट टाढा रहे नालायकहरुबाट शासित हुनुपर्छ’ भन्ने सुनेको थियो । ‘यात्रा यहीँबाट सुरू गर्ने’ निर्णय ग¥यो । ‘कसरी प्रवेश गर्ने ?’ उपाय सोच्यो । दस कक्षासम्म एकसाथ पढेको र एसएलसीमा सत्रपटक फेल भएको रामचन्द्र कुइँकेल उसको साथी, ठूलो दलको केन्द्रीय सदस्य, उही भयो उपाय । प्रस्ताव राख्यो । साथीले साथ दिने बचन दियो ।
कुइँकेलको पूरा कुरा सुनेपछि पार्टी सभापतिले अरु साथीहरुको मुख हेरे । कसैको अनुहार पनि उज्यालो पाएनन् ।
‘विद्वान् हो ?’ सभापतिको प्रश्न ।
‘हो हजुर, धुरन्धर । विदेशी प्रत्रिकाहरुमा पनि लेख छापिने । म चिन्दछु । योग्य मान्छे ।’
‘होइन कुइँकेलजी, अति जान्ने र विद्वान् हाम्रो लागि पटकपटक झ्याउ भएको कुरा इतिहास साक्षी छ । काम छैन राजनीतिमा यस्तो मान्छेको । धेरै पढेको, त्यागी, इमानदार, नैतिकवान् मकहाँ लिएर नआउने । हामीलाई अल्लि अरु नै गुण र योग्यता भएको मान्छे चाहिन्छ, मतलब तपाईंजस्तो । यी भावुक मानिसहरु साहित्यमा ठीक, राजनीतिमा होइन ।’
सुबोधले कुनै दलमा पनि प्रवेश पाएन । अरु जागिर खान उसलाई मन लागेन । ऊ जागिर खान स्वदेश फर्किएको थिएन । आखिर ‘पलायन’ उसको नियति भयो । ‘हे नेपाल आमा, मलाई मापÞm गर’ क्षमा माग्यो जन्मभूमिसित । १० वर्ष बित्दा सुबोधका सारा नातेदार पनि विदेश नै ।